चलचित्र "झुम्की"-समिक्षा - Reel Mandu
निर्माता अपिल विष्टले पहिलोचोटी झुम्कीबाट निर्देशनमा हात हाले र डेब्यू फिल्म नै उनको स्टोरीटेलिग निक्कै प्रभावशाली र सशक्त छ भन्ने प्रमाण छाड्न सफल भएका छन् । उनको कन्फिडेन्स चलचित्र झुम्कीमा प्रष्ट देखिन्छ र उनको काम अब्बल दर्जाको छ ।
माओवादी द्धन्दकालिन परिवेशमा आधारित चलचित्र झुम्की विशुद्ध एउटा पश्चिमे थारु वस्तीको कथा हो । सफल चलचित्र ‘कवड्डी’ र ‘कवड्डी कवड्डी’का प्रायः सबै हस्तीकरुको नाम जोडिएको यो चलचित्र यस हप्ताको वक्स अफिस रिलिज हो । आउनुहोस वहुप्रतिक्षीत चलचित्र झुम्कीको समिक्षातर्फ लागाैं ।
चलचित्र ‘झुम्की’को कथा एउटा रहस्यमय हत्यामा शंकास्पद हत्याका अभियूक्त देवकी (रिश्मा गुरुङ्ग) र गोकुल भट्ट (मनोज आरसी) को कथा हो । इन्सपेक्टरको भूमीकामा रहेका दयाहाङ्ग राइले छानवीनसंग सम्बन्धित गतिविध गरेका देखिन्छन् । हत्यापछी बेग्ला बेग्लै रुपमा फरार भएका रिश्मा र मनोजबिच बाटोमा भेटघाट हुन्छ र त्यहि पटके भेटको फलस्वरूप दुवै एकअर्काको मायामा पर्दछन् । यो हत्याका बारेमा रिश्मालाई सबै थाहा हुन्छ र यस्तोमा दुवै फेरी एकपटक दाङ्ग पुग्छन जहाँ उनिहरुबिच प्रेम शुरुभएको थियो । उता दयाहाङ्ग दुवैको खोजिमा निस्कन्छन्, यस्तोमा आखिर यो हत्याको रहस्या के हो ? रिश्माले किन खुलेर मनोजको प्रेम स्वीकार गर्न सक्दिनन, दुवैबिचको प्रेम आखिर कहाँसम्म पुग्छ त ? यसकालागि यहाँहरुले चलचित्र ‘झुम्की’ हेर्न हलसम्म पुग्नैपर्ने हुन्छ ।
रामवावु गुरुङ्गले चलचित्र झुम्कीलाई जादुई र रहस्यमय तरिकाले लेखेका छन, पृथक कथामा दर्शकहरुलाई तान्नसक्ने उत्कृष्ट र प्रभावशाली संवादहरु भएको यस चलचित्रलाई सुदृढ मान्नुपर्दछ ।
पटकथा यति मजाले लेखीएको छ कि दर्शकहरुको ध्यान भड्कीन पाउँदैन र उनिहरुलाई सोचिरहन बाध्य बनाउँदछ । चलचित्र कुनैपनि बेला फिक्का महशुस हुँदैन, रामबावुको स्क्रिप्टलाई धन्यवाद, गज्जबले संयोजित छ, सन्तुलित छ ।
चलचित्रका दुई दृश्यहरु निकै राम्रो गरि लेखिएको छ, निश्चल बस्नेत देखापर्ने सिन र त्यसलगत्तै देखिने गाडीको सिन उत्कृष्ट छ । भोलाराज सापकोटा र दयाहाङ्ग राईबिच हुने संवादका दृश्यहरू उत्कृष्ट छन् ।
शैलेन्द्र कार्की को क्यामरा कार्य निकै उत्कृष्ट छ, फ्रमिङ्गहरु अब्बल दर्जाका छन् । रोहित शाक्यको ब्याकग्राउन्ड स्कोरको तारिफगर्ने शब्द नभेटीएला, उन्ले झुम्कीवाट वेस्ट ब्याकग्राउन्ड स्कोरको अवार्ड हातपार्न वेर छैन, निमेश श्रेष्ठको इडिटिग उत्कृष्ट छ र वाकी सबै पक्षजस्तै कला निर्देशन पनि उत्कृष्ट छ । चलचित्रमा थारु टोललाई मज्जाले देखाइएको छ ।
दयाहाङ्ग राइले प्रहरी इन्सपेक्टरको भूमिकालाई न्याय दिएका छन, अनुसन्धानसंग सम्बन्धित प्रसंगहरूमा उनका अनुहारका हाउभाउले समेत चलचित्रको सस्पेन्स र अनुसन्धानप्रतिको गम्भिरतालार्इ राम्ररी उतारेका छन् । उनी दर्शकलाई हँसाउन कहिल्यै चुक्दैनन भने मनोज आरसी पनि उत्तिकै उत्कृष्ट छन । कथाको भार उनले उत्कृष्ट तरिकाले बोकेका छन् भने रिश्मा गुरुङ्ग ‘कवड्डी’ र ‘कवड्डी कवड्डी’ पछि भिन्न गेटअपमा देखिइएकी छिन् । तर उनको गेटअप जस्तै उनको क्यारेक्टर भने भिन्न छैन । उनले थारु भाषा बोलेको त्यती सुहाएको भने छैन । यी बाहेक चलचित्रमा प्रमोद अग्रहरी र भोलाराज सापकोटा छन र दुवैको अभिनय सशक्त छ । प्रमोद अग्रहरी चलचित्रको अधिकांश ठाउमा सिन स्टिलर बनेका छन । चलचित्रमा झुम्कीको क्यारेक्टरमा मलिना जोशी छोटो समयकालागी देखिन्छिन र उन्ले आफ्नो उत्कृष्ट लुक्स र थरुनी हाउभाउ र बोलीले सबैलाई प्रभाव पार्दछिन ।
उनको क्यारेक्टरले चाँडै हिम्मत हारेको देख्दा दर्शकहरुलाई अलि चित्त नबुझ्न सक्छ, चलचित्रमा अतिथि भूमीकामा निश्चल बस्नेत देखिन्छन र उनले छोटो समयमै दर्शकलई भरपुर मनोरञ्जन दिन्छन् ।
एक साता अघि दर्शकलाई क्लास फिल्म पस्किन खोज्ने चलचित्र ‘गाँठो’को असफल प्रयास आलोकाँचो प्रयासका रुपमा तूहिएर गएको छ । चलचित्रप्रेमीले ‘गाँठो’लाई सिध्धै अस्विकार गरेपनि यो साता ‘झुम्की’ले क्लासको चलचित्रका रुपमा आफूलाई पस्केको छ । चलचित्रको पेस थोरै विस्तारै भएकाले सिङ्गल स्क्रिनको दर्शकहरुकालार्इ यो चलचित्र अाक्रमक नलाग्न सक्ला तर धैर्य राखेर उत्कृष्ट सिनेमा हेर्न रुचाउने सिनेप्रेमीलाई ‘झुम्की’ पर्फेक्ट चलचित्र हो । इङगेजिंग प्लट, उत्कृष्ट परफरमेन्स र ब्याकग्राउन्ड स्कोर अनि अर्को उल्लेख गर्नैपर्ने कुरा उत्कृष्ट क्लाइमेक्श ‘झुम्की’को प्रमुख आकर्षण हो ।
हामी यो चलचित्रलाई कूल ५ मध्य ३ंं.५ स्कोर प्रदान गर्दछौ ।
यो समिक्षा मन्दिप गाैतमको सहयोगमा सुयोग ढकालले तयार पार्नुभएको हो।